Kooxda Muqdisho City Club Oo Safar U Ah Puntland – Goobjoog News
Naadiga Dolwadda Hoose ee Muqdisho City Club oo olahan ku guulaystay horyaalka Somalia Premier League 2019-2020 ayaa safar dhul barasho iyo ciyaaro saaxiibtinimo u aadaysa deegaaanada maamulka Puntland.
Muqdishu City Club oo hanatay horyaalka kolkii kowaad,tan iyo markii ay qaadatay maagaca Gobolka Banaadir bishii November 2018 ayaa samaysay guulo waaweyn oo dhinaca ka qeyb galka tartamada kubbadda cata ee dibadda iyo gudaha labadii sano la soo dhaafay.
Waxayna xidigaha Muqdisho City Club casuumaad ay ka helyn naadiga Horseed oo ka mid ah kooxaha ugu adag ee ka dhisan deegaanada Puntland.
“Waan soo dhawaynaynaa Muqdisho City waa koox weyn,waxayna saaxiibo badan ku lee dahay caasimada Garoowe iyo guud ahaan Puntland” waxaa sidaas Goobjoog Sports u sheegay Maxamed Cali Ciise (Ciiro) oo ah guddoomiyaha Xiriirka Kubbadda Cagta Puntland.
Kaliya safarka kooxda MCC ma ahan ciyaaro saaxiibtinimo iyo is dhaxgal bulsho,waxay ay ciyaartooyda iyo maamulkooda soo baran-doonaan dhulka quruxda ee u duga Puntland.
“Sharaf ayay inoo tahay in aan u safarno Puntland waxaan ku lee nahay saaxiibo badan iyo taageerayaal badan,waxayna tani bilaw u tahay is dhaxgalka iyo wada shaqeynta labada dhinac waana howl muhiim ah” ayuu Goobjoog Sports ugu waramay guddoomiyaha kooxda Muqdishu City Abuukar Yabarow.
Si kastaba safarka MCC ayaa noqonaya kii labaad oo ay koox ka dhisan Muqdisho ku tagto meel ka baxsan caasimada, waxaana horay sidan oo kale u samaysay naadiga Elman,waxaana talaabadan is-dhaxgalka soo dhaweeyay taageerayaasha kubbadda cagta ee gudaha iyo dibadda.
Qaar Ka Mid Ah Golaha Wasiirrada Somaliland Oo Warbiximo Laga Dhegeystay